केन्ट सुप्रीम लाइट र केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइन नेपाली बजारमा| Corporate Nepal
माघ ७, २०७७ बुधबार १४:२५
काठमाडौं । ईओएल प्रालि नेपालमा केन्ट उत्पादनहरूकालागि एक मात्रआधिकारिक वितरक, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गतको संस्थाले केन्ट सुप्रीम लाइट र केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्क लाइनलगरी दुई आरओ मोडेल नेपाली बजारमा ल्याएको छन् ।
केन्ट सुप्रीम लाइटमा केन्टको खनिजआर ओ टेक्नोलोजी र टीडीएस नियन्त्रकको साथ छ। यस शुद्धीकरणले पानीबाट हुने रोगहरूबाट जोगाउँने कम्पनीको दावी छ । यसले पानीलाई शुद्ध गरेर यसको अत्यावश्यक प्राकृतिक खनिजलाई यथावत राख्दछ ।
केन्ट सुप्रीम लाइट सबै खालको पानीको शुद्धिकरणको लागि उपयुक्त हुनेछ । अहिले बजारमा केन्ट सुप्रीम लाइटको बजारको २१ हजार ९९० रुपैयाँ रहेको छ । केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्कलाइनले १००% शुद्ध र खनिजयुक्त शुद्ध पानी प्रदान गर्दछ जसमा केन्टको खनिज आरओ टेक्नोलोजी रहेको छ । नेपालीघरहरू र कार्यालयहरूको लागि उपयुक्त, यो उपकरण सबै खालको पानीको शुद्धिकरणको लागि उपयुक्त छ ।
केन्टको उत्कृष्ट अल्क लाइन आरओ प्यूरीफायरले पानीको पीएच स्तर कायम राख्दछ । यसले पानीको पीएच स्तर ८.० देखि ९.० कोबीचमा समायोजन गरेर पानीलाई क्षारीय बनाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
केन्ट ग्रान्ड प्लस अल्क लाइनइन–ट्याङ्कयु भी कीटाणु शोधन सुविधाको साथ सुसज्जित छ । भण्डारण ट्याङ्कीमायु भी एलईडीले लामो समयको लागिपानी शुद्ध राख्ने काम गर्दछ ।
केन्ट ग्रान्डप्लसअल्कलाइनको बजारको २९ हजार ९९० रुपैयाँ रहेको छ । केन्ट आर.ओ. प्युरिफायरहरूलाई डब्ल्यूक्यूए को अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्ध गोल्ड सील र एनएसएफ, (संयुक्त राज्य अमेरिका) बाट प्रमाणपत्र प्रदानगरिएको छ ।
ओरालो झर्यो शेयर बजारः होटल्स र जलविद्युतका लगानीकर्ता मालामाल, बाँकी समूह राताम्मे
अप्रिलिया एसएक्सआर १६० स्कुटर नेपाली बजारमा भित्रियो, मूल्य कति ?
सुनको मूल्य पाँच सय रुपियाँ बढ्यो, चाँदी स्थिर
दोस्रो बजारमा आकर्षणः ६ लाख पुग्न लागे सक्रिय लगानीकर्ता